Ajaaniibtu waxay helaan gunno howlgab oo ka hooseeysa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ajaaniibtu waxay helaan gunno howlgab oo ka hooseeysa
La daabacay onsdag 26 april 2017 kl 17.05
Waxaa wax looga qaban karaa in sanooyin dheeri ah la shaqeeyo
Lacag waraaqo iyo qadaadiic ah oo miis saaran. sawir: Ruud, Vidar
Ajaaniibta dalka dibaddiisa ku dhalatay ayey tahay iney fishaan gunno howl-gab oo 2 000 oo koron gaarsii-san ka hooseeysa bishii kolka loo barbar-dhigo dadyoowga dalka ku dhashay, inkasta oo ey qaadan jireen mushaarooyin isku mid ah. Sida ka muuqatay war-bixin ay soo saartay shirkadda lagu magacaabo gunnadayda hawl-gabka - Min Pension.
Kristina Kamp waa dhaqaale yahan ku takhasustay culuunta gunnada howl-gabka:
- Dabcan waa wax cad in mushaarooyin isku mid ah la qaato goorta howl-gabka laga gelayo shaqada, waxaase halis wayn loogu jiraa in gunnada howl-gabku kala duwanaato haddii uu shakhsigu ku dhashay dal kale. Waxaa sidoo kale dhici karta inuu shakhsigu dalka soo galay goor dambe oo aannu ka gaarin inuu shaqeeysto gunno howl-gab ku filan.
Shirkadda Min Pension ayaa eegtay macaamiisheeda dhaltay sannadihii kontameeyadii oo qaadan jirey bilihii howl-gabka ka horreeyey mushaarooyin u dhexeeya 25-30 000 oo koron. Halkaasina oo ay ka muuqatay farqi laba kun kor u dhaafaya oo u dhexeeya dadka dalka ku dhashay iyo kuwa dibadda ku dhashay. Farqi midkaa la mid ah ayaa sidoo kale u dhexeeya dadyoowga qaata mushaarooyinka kale, sida war-bixinta ku cad.
War-bixinta ay soo saartay shirkadda Min Pension ayey sal-dhig u ahaayeen gunnada guud ee hoel-gabka, gunnada shaqaalaha waxa lagu magacaabo tjänstepension iyo sidoo kale gunnada sida gaarka ah loo aruursado privat sparande, hase yeeshee aanay ku jirin gunnada howl-gabka ee waddan kale laga helo.
Sharaxaadda ugu ballaaran ee farqiga gunnada howl-gabka ayaa ah in shakhsiga dalka dibaddiisa ku dhashay uu suurtagal u helay sannado ka yar ee uu dalka ka howl-galey. Midda wax lagaga dhimi karo farqigaasina tahay in sanooyin dheeri ah la shaqeeyo inta aan howl-gabka la gelin, sida ay sheegtay Kristina Kamp:
- Haddii sannad dheeri ah lagu howl-galo mushaarooyinka aannu ka hadleeyno ee gaarsii-san 25-30 000, waxaa markaa la heli gunna dheeri ah oo 1 000 gaarsii-san. Waxaa la oran karaa in haddii laba sannadood oo dheeri ah la shaqeeyo uu farqigu baaba’ayo.